IGoogle isivele ikhiphe inguqulo yokubuka kuqala ye-Android 11 futhi lezi yizindaba zayo | Kusuka kuLinux
I-Google yethulwe ngolwesibili inguqulo yokuqala ye-Android 11 yokuhlola kuqala, ukuthuthuka okukhulu okulandelayo kusistimu yakho yeselula. Yize iGoogle ingafakanga izithombe-skrini eziningi kokuthunyelwe ukuze isekele ukumenyezelwa kwezinguquko ezintsha, inkampani yenze izethembiso ezinkulu, njengezici zobumfihlo ezingcono nezindawo zokuxhumana ezintsha ukuthumela imiyalezo, izinqubo ezintsha ezihlobene ne-5G noma ukuzimela, kanye nokunye ukuthuthuka okufana nokuqoshwa kwesikrini sendabuko, phakathi kwabanye.
Lokhu ukubuka kuqala kwe-Android 11 yabathuthukisi abeza ngaphambi kwesikhathi kunokujwayelekile futhi isiyatholakala kumadivayisi wePixel 2, 3, 3a kanye no-4, kanye nezithombe ezijwayelekile zohlelo. Igama i-Android 11 liwumphumela wesibizo esisha esamukelwa ngemuva kokwethulwa kwenguqulo yangaphambilini yohlelo lwayo lokusebenza lweselula.
Lezi ngezinye zezici ezintsha nezibuyekezo iGoogle efakwe ohlwini lwayo kubhulogi labo:
Kungcono inketho yokugunyazwa "eyodwa" yezinhlelo zokusebenza: Lesi ngesinye sezici iGoogle ezigqamisile ekumenyezelweni Konjiniyela Wokubuka kuqala we-Android 11 njengoba izonikeza "imvume eyodwa" yezinhlelo zokusebenza ezifuna ukufinyelela kwimininingwane yendawo yazo, imakrofoni kanye namadivayisi wekhamera. Kuyinto elula elula, kepha yenza i-Android iphephe kakhulu.
I-Android Q izobizwa nge-Android 10 futhi iGoogle imemezele ukuthi ishiya amagama wamagama
I- "Bubbles" API, lesi isixhumi esibonakalayo esisha somsebenzisi sezinhlelo zokusebenza zokuthumela imiyalezo esivumela izingxoxo eziningi ukuthi zitholakale kalula noma kuphi, zizinciphise zibe yindilinga encantayo ebusweni bomuntu oxhumana naye. Ngaphezu kohlelo lokusebenza lwemiyalezo ye-Google, ezinye izinhlelo zokusebenza ezifana ne-WhatsApp, Facebook Messenger noma i-Signal ingahle ihambisane.
Okunye okusha okuvelele kulokhu kubuka kuqala kwe-Android 11 yilokho I-Google isishintshe iphaneli yezaziso ku-Android futhi Futhi kulo nyaka i-Google ithi iphaneli izofaka "isigaba esinikezelwe ezingxoxweni ngomthunzi wesaziso."
I-Google yethule isigaba esisha "sezingxoxo" endaweni yesaziso ehambisa imiyalezo emisha endaweni yayo ngaphambi kwawo wonke ama-imeyili, izintandokazi ze-Instagram, kanye nokuvuselelwa kohlelo lokusebenza. Umqondo wukwenza izingxenye zokuxhumana zefoni yakho zifinyeleleke kalula futhi zivumele abasebenzisi ukuthi "bathole ngokushesha izingxoxo zakho zamanje nabantu ezinhlelweni abazithandayo."
Ukuqoshwa kwesikrini: Lo msebenzi ukuvumela ukuba urekhode isikrini futhi kungenxa yokuthi iGoogle isivele inenguqulo ku-beta ye-Android 10 engafinyelelanga enguqulweni yokugcina.
Ikhasi "Lokusebenzisana Lokusebenza": I-Google yenza impilo ibe lula kubathuthukisi bohlelo lokusebenza ku-Android 11 njengoba iGoogle idale ikhasi "Lokuvumelana kohlelo lokusebenza" elinemisebenzi yokushintsha yohlelo lokusebenza ngalunye.
Umqondo ngukuthi esikhundleni sokuchaza i-SDK entsha khomba bese ubuyisela isicelo sakho ukuze usivivinye, vele uvule ikhasi lokuhambisana wohlelo lokusebenza, qala ukuguqula izinkinobho ubone ukuthi yini okungasebenzi?. I-Google iphinde ithi izamile "ukunciphisa izinguquko zokuziphatha ezingathinta izinhlelo zokusebenza" futhi yenze izinguquko zokwamukela lapho kungenzeka khona.
Umuzwa ongcono we-5G: I-Google ifuna ukuvumela abasebenzisi abaningi emhlabeni jikelele ukuthi babe nokuhlangenwe nakho okungcono kwe-5G. Ku-Android 11, inkampani ivuselele futhi yavuselela ama-API wokuxhuma ukuze usebenzise ngokunenzuzo isivinini esithuthukisiwe se-5G. Le API ivumela abathuthukisi ukuthi babheke ukuthi ukuxhumeka akunamkhawulo futhi uma kunjalo, banikeze ukulungiswa okuphezulu noma ikhwalithi engasebenzisa idatha eningi.
Ukuhlelwa kwe-Android kuyaqhubeka nge-Android 11: ku-Android 10, i- «Mainline Project», ihambise izinto eziningi zohlelo ku-APK ibuyekezwa kufomethi yefayela entsha, enamandla kakhulu ebizwa nge- "APEX".
I-APEX ngu ifomethi yefayela elenzelwe ukufinyeleleka ekuqaleni kwenqubo yokuqalisa futhi unezimvume eziningi kune-APK, ikwenza kube kuhle ukusingathwa nokuvuselelwa kwezingxenye zohlelo ezisezingeni eliphansi.
Ekugcineni bamemezela ezinye izinguquko ezincane nezinguquko, njengokushintshela okuzenzakalelayo kumodi emnyama nekhono lokuphina izinhlelo zokusebenza phezulu kweshidi lesenzo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Google isivele ikhiphe inguqulo yokubuka kuqala ye-Android 11 futhi lezi yizindaba zayo